12 လက်မ Macbook ကိုပထမ ဦး ဆုံးထင်မြင်ချက်များ | ငါက Mac ကပါ
MacBook 12 အသစ်၏ပထမဆုံးထင်မြင်ချက်များသည်ကျဆင်းသွားသည်
Jordi Gimenez | | MacBook, Mac ကွန်ပျူတာများ
ခဏတာငါမှတ်ချက်ပေးခဲ့သည် အံ့ဆဲဆဲပစ်လွှတ် ၁၂ လက်မ MacBook အသစ်ကိုမနက်ဖြန်နှင့်ယခုအတွက်စီစဉ်ရန်စီစဉ်ထားသည် ပထမ ဦး ဆုံးဗီဒီယိုပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းနှင့်ထင်မြင်ချက်များ အသစ်က Apple စက်၏။ ဤပြန်လည်သုံးသပ်မှုများသည်မီဒီယာအမျိုးမျိုးမှဖြစ်ပြီး Apple စက်အသစ်၏အထင်အမြင်ကိုဖော်ပြသည်။
မှတ်ချက်အများစုဟာတိုက်ရိုက်ဆက်စပ်လျက်ရှိသည် ဒီ Mac ပေါ်မှာ Apple ကရရှိသောသေးငယ်တဲ့အရွယ်အစား, Processor ရဲ့စွမ်းအား၊ ကီးဘုတ်နဲ့ track Touch အသစ်က Force Touch နည်းပညာပါ။ အချို့သောမီဒီယာများက“ ညည်းညူသည်” သို့မဟုတ်လုံးဝရှင်းရှင်းလင်းလင်းမမြင်ရပါ။ ၎င်းတွင် USB-C port သာရှိပြီးအက်ပဲကထည့်သွင်းထားသောကီးဘုတ်အသစ်၏အတိုအကွာအဝေးနှင့်ပိုမိုကြီးမားသောသော့များနှင့်အသုံးပြုရန်လိုအပ်လိမ့်မည်ဖြစ်ကြောင်းရှင်းရှင်းလင်းလင်းမမြင်ရပါ ကြီးစွာသောအနာဂတ်။
နောက်ထပ်ကြည့်ရမယ့်ပြAppleနာကတော့ Apple သုံးစွဲသူတွေသိပြီးသားအံ့သြဖွယ်ကောင်းတဲ့ Retina မျက်နှာပြင်ပါ ဒီ Macbook ဘယ်လောက်ကြည့်ကောင်းလဲ ပရိုဆက်ဆာ၏ရလဒ်သည် Geekbench tool နှင့်အတူ (အစစ်အမှန်စမ်းသပ်မှုများနှင့်မတူပါ) နံပါတ်များအရအတော်အတန်မျှတနိုင်သည်။ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်အသစ်သော 12 နှင့်အတူလုပ်ဆောင်တော့မည့်အလုပ်များနှင့် ပတ်သက်၍ ရှင်းရှင်းလင်းလင်းရှိရမည် MacBook -inch ။
၏ဖြစ်ရပ်အတွက် TechCrunch မှ Darrell Etheringtonသူကဒီ MacBook မှာနှေးနှေးပြီး chicha 'မရှိခြင်းဟာ Photoshop, Final Cut Pro (သို့) Logic Pro ကိုသုံးဖို့သူမျှော်လင့်ထားတယ်၊ ဒါပေမယ့်စက်ကသူ့ကိုအရမ်းအံ့အားသင့်စေခဲ့တယ်၊
Dieter Bohn, del mendio, The Vergeဒါကိုအီးရှင်းပြပါ၎င်းသည်သင်၏နေ့စဉ်အလုပ်၏ ၇၀ ရာခိုင်နှုန်းကိုအလျင်အမြန်ပြုလုပ်နိုင်သည်၊ သို့သော်သင်ယခင်ကထက်အနည်းငယ်နှေးသည်။ ၎င်းသည်အဆင်ပြေပါသည်၊ သို့သော်၎င်းသည်သင့်လက်ရှိ Mac ထက်ပိုမိုနှေးသည်။ ၎င်းသည်သင့်အားဗွီဒီယိုအလုပ်များကိုတည်းဖြတ်ရန် (သို့) ကြီးမားသောအလုပ်များလုပ်ရန်တောင်းဆိုသောအခါသိသာသည် စာကြည့်တိုက်များ, ဒီဟာအရမ်းနှေးကွေး
USB-C တိုင်ကြားချက်များမှလာသည် Engadget မှ Dana Wollman. တိုင်ကြားချက်၏အကြောင်းပြချက်မှာယနေ့တွင်ကျွန်ုပ်တို့သည် standard port နှင့်မရင်ဆိုင်ရခြင်းကြောင့် MacBook အသစ်သည်ရိုးရှင်းသော USB ကိုလိုက်လျောညီထွေဖြစ်စေရန်၊ MacBook အားသွင်းရန်နှင့်ဖိုင်များကိုလွှဲပြောင်းရန်အတွက်စျေးကြီးသည့်ပစ္စည်းများအတွက်အပို ၀ န်ဆောင်မှုကိုဆိုလိုသည်။ အမှန်တရားကတော့ဒီပြanနာကအမြီးကိုဆောင်စေတယ်၊ ​​ဒါပေမယ့်ဒါကစက်ပစ္စည်းတွေရဲ့အနာဂတ်ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့သင်ယုံကြည်တယ်။
နောက်ဆုံးအနေနဲ့၏အမြင် The Wall Street Journal မှလူသိများသော Joanna Stern။ ၎င်းသည် MacBook အသစ်နှင့် ပတ်သက်၍ အငြင်းပွားဖွယ်ရာထင်မြင်ချက်ဖြစ်ပြီးအနာဂတ်တွင်အနာဂတ်တွင် Mac သည်အလွန်ကောင်းသောစက်ဖြစ်လာနိုင်ကြောင်းရှင်းပြသော်လည်း၊ အကောင်းဆုံးသော ၀ ယ်ယူမှုမှာ MacBook Air သို့မဟုတ် MacBook Pro Retina 13-inch မတိုင်မီဖြစ်သည်ဟုရှင်းပြသည် MacBook အသစ်
အင်ဒရူး Cunningham, Ars Technica MacBook အသစ်ကကျွန်တော်တို့ကိုတွန်းအားပေးတယ်လို့ရှင်းပြတယ် ကြိုးမဲ့လူနေမှုပုံစံစတဲ့ကမ္ဘာတဝှမ်းမှာဒီနေ့ဖြစ်နိုင်မလားဆိုတာကိုသိချင်နေတယ်။ ပိုမိုကောင်းမွန်သောဆက်သွယ်မှုများနှင့်ဤတစ်ခုတည်းသော USB-C port ပေါ်တွင်ပိုမိုမှီခိုမှုသည် MacBook အသစ်အတွက်ပြaနာတစ်ခုဖြစ်နိုင်သည်။
အခြေခံမော်ဒယ်၏စျေးနှုန်းသည်အသုံးပြုရန်အတွက်ပါဝါလိုအပ်သောသုံးစွဲသူများအတွက် MacBook ကိုရွေးချယ်ရန်ရှုပ်ထွေးစေသည်။ သို့သော်၎င်းသည် Mac အားလုံးနှင့်နောက်ဆုံးတွင်ဖြစ်ပျက် အားလုံးလက်ရှိ gadget များနှင့်အတူ။ ထင်မြင်ချက်တိုင်းသည်မှတ်မှတ်ရရရှိပြီး၎င်းစက်များအနက်တစ်ခုအားကိုင်ဆောင်လိုသူများအတွက်၎င်းတို့သည်အရေးကြီးသောအခြေခံဖြစ်သည်မှာရှင်းနေပါသည်။ သို့သော်ကျွန်ုပ်တို့အကောင်းဆုံးလုပ်နိုင်သည်မှာ Apple စတိုးသို့မဟုတ်အိမ်နှင့်နီးသောပြန်လည်ရောင်းချသူများထံသွားရန်ကြိုးစားခြင်းဖြစ်သည်။ နှင့် ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်နာရီအနည်းငယ်တောင်စမ်းကြည့်ပါ ဦး.
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ငါက Mac ကပါ » Mac ကွန်ပျူတာများ » MacBook » MacBook 12 အသစ်၏ပထမဆုံးထင်မြင်ချက်များသည်ကျဆင်းသွားသည်
Carlos Alvarado (@ calvarado2004) ဟုသူကပြောသည်
MacBook အသစ်သည်ကျွန်ုပ်၏ဒုတိယ Mac ကိုဝယ်ယူပြီးမှသာရောက်ရှိခဲ့သည်။ အဖြူရောင် 2010 MacBook ကိုအသုံးပြုသည်။ ထိုနှစ်များအတွင်းကျွန်ုပ်ဝယ်ယူရန်စိတ်ကူးရှိခဲ့ဖူးသော်လည်းတစ်ခါမျှမဝယ်ခဲ့ပါ၊ သို့သော် 8gb ram နှင့် 250 gb ssd; ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ဒုတိယသို့မဟုတ်တတိယမျိုးဆက်အတွက်ငါပွတ်ပန်းသီးအပါအဝင် iPhone ၏စတိုင်ကိုယူသော, ထုတ်ကုန်အသစ်အခွင့်အလမ်းငါပေးမည်, ငါပစ္စည်းကိရိယာများ၏ပါးလွှာနှင့်အတူတောက်ပပေမယ့်ခက်ခဲကြိုက်နှစ်သက်ကြလိမ့်မယ်။
Carlos Alvarado (@ calvarado2004) ကိုစာပို့ပါ။
iTunes 12.1.2 ကိုဓာတ်ပုံအထောက်အပံ့ဖြင့် update လုပ်သည်
၁၂ လက်မ MacBook အသစ်အတွက်အဆင်သင့်ဖြစ်ပြီလား။